Global Voices teny Malagasy » Arzantina: Miteraka Adihevitra Ilay Lahatsarin’ny Lalao Olympika Tany Amin’ireo Nosy Malouines · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 23 Jolay 2012 12:58 GMT 1	 · Mpanoratra Laura Schneider Nandika (en) i Laura Schneider, miora
Sokajy: Arzantina, Ady & Fifandirana, Fanatanjahantena, Fifandraisana iraisam-pirenena, Mediam-bahoaka, Politika, Lalao Olaimpika
Ampahany amin'ny fandrakofanay manokana ny Lalao Olaimpika Londona 2012  ity lahatsoratra ity.
Ambonin'ny lanja ara-panatanjahantenan'ilay hetska, misy ambadika politika ihany koa io fifaninanana Olaimpika 20012 any Londona io ho an'i Arzantina noho ny fahatsiarovana ireo maty tanatin'ilay Adin'ireo nosy Malouines . Nanamarika ny tsingerintaonan'ny fipetrahan'ireo ekipan'i Arzantina tany amin'ireo Nosy Falkland ny 2 Aprily 2012, fantatra amin'ny anarana hoe Malouines any Arzantina. Niaraka tamin'ny fanakaikezan'ny fanombohan'ny Lalao Olaimpika 2012 , namoaka lahatsary fahatsiarovana ny biraon'ny Filohan'i Arzantina amin'ny alalan'ny fantsona YouTube-dry zareo [es]:
Ilay lahatsary, izay nataon'ny Biraon'ny Fitondrana Arzantina  [es] ary nalaina tany amin'ireo nosy ireo, dia mampiseho mpifaninana iray avy ao Arzantina mikotrana ho amin'ilay Lalao Olaimpika any Londona any amin'ireo Nosy Malouines, zaratany Britanika an-dranomasina. Niteraka adihevitra ilay didy farany: “Raha hifaninana any amin'ny tany Anglisy isika, manazatra tena any amin'ny tany Arzantina.” Fernando Zylberberg  no mpilalao fototra anatin'io lahatsary io, mpilalao anatin'ny Ekipan'ny Hockey Arzantina, izay tsy handray anjara anatin'ny Lalao Olaimpika 2012 raha ny marina.
Teo noho eo ny fanehoan-kevitry ny Kaomity Olaimpika. Namoaka izany fanehoan-kevitra izany ny vohikala SSQH  [es]:
Nitsikera mikasika io adihevitra io ihany koa ny bilaogy Sopitas  [es]:
Penguin News , gazety avy any amin'ireo Nosy Malouines, nandray izany lahatsary izany ho kivalavala:
Na eo aza izany, araka ny hasehon'ireo tsikera  [es] ao amin'ny YouTube, ho an'ireo Arzantina maro dia manamafy ny maha-tompon'ireo Nosy Malouines azy ireo izany lahatsary izany.
Ampahany amin'ny fandrakofanay manokana ny Lalao Olaimpika ao Londona 2012  ity lahatsoratra ity.
Nanampy tamin'ny famoahana ity lahatsoratra ity i Jane Ellis  .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/07/23/35773/
 Lalao Olaimpika Londona 2012: https://globalvoicesonline.org/specialcoverage/london-2012-olympics/
 Adin'ireo nosy Malouines: https://globalvoicesonline.org/2012/04/04/argentina-and-the-falkland-islands-30-years-after-the-armed-conflict/
 Biraon'ny Fitondrana Arzantina: http://www.presidencia.gob.ar/
 Fernando Zylberberg: http://en.wikipedia.org/wiki/Fernando_Zylberberg